Yan Naing Myint – Cyber Wings Co., Ltd
Author: Yan Naing Myint
Apr 7, 2019 Yan Naing MyintAnnouncement, Knowledge Sharing
Virtual Private Server (VPS) တွေဟာ ဘက်စုံသုံးလို့ရတဲ့အတွက် ယနေ့နောက်ပိုင်းခေတ်မှာ ရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်း Server ကြီးတစ်ခု သို့မဟုတ် Physical Server Cluster တွေပေါ်မှာ Virtualization နည်းပညာ အသုံးပြုပြီး VPS Server ငယ်လေးတွေ ခွဲပြီး အသုံးပြုကြသလို Cloud Computing နည်းပညာနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး Cloud VPS ဆိုတာတွေလည်း ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် VPS တွေပေါ်မှာ Web Server တွေ Email Server တွေ File Server တွေ အစရှိတဲ့ Server ပေါင်းစုံအပြင် အခြားသော တကိုယ်ရေ အသုံးပြုမှုများအတွက်ပါ VPS တွေကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုလာလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် VPS…
Apr 3, 2019 Yan Naing MyintAnnouncements
Development Department မှ Head of Department ဖြစ်သူ၊ Cyber Wings Co., Ltd ၏ Director တစ်ဦးလည်းဖြစ်သူ ဦးထက်ဝေယံစိုးသည် ဧပြီလ (၂) ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် Director အဖြစ်မှ မိမိသဘောဆန္ဒအတိုင်း နှုတ်ထွက် လိုသည့်အတွက် Company တွင်း Director များ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် နှုတ်ထွက်ခွင့်ပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဦးထက်ဝေယံစိုးနှင့် ပတ်သက်သောကိစ္စရပ်များအားလုံးသည် Cyber Wings Co., Ltd နှင့် သက်ဆိုင်မှု မရှိတော့ကြောင်း အတိအလင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာအပ်ပါသည်။ Yan Naing MyintManaging DirectorCyber Wings Co., Ltd
Aug 24, 2017 Yan Naing MyintInternship, UCSYCertificate of Appreciation, Internship
We have received “Certificate of Appreciation” in recognition of valuable supporting to Internship program of Final Year Students from University of Computer Studies – Yangon. I, Yan Naing Myint, hereby, asasupervisor of Internship students to Cyber Wings Co., Ltd and CEO of it, thank to University of Computer Studies – Yangon. And, let…
Aug 23, 2017 Yan Naing MyintBASH Scripting, UCSY